नेपाल आज | फास्टफुडे खान्की, फेसबुके जीवन
फास्टफुडे खान्की, फेसबुके जीवन
दिनभरी कामको चापले थकित भएर साँझ घर आउँदा श्रीमती फेसबुकमा, छोरो ल्यापटपमा, छोरी ट्याबलेटमा हुन सक्छन् । टेलिभिजन कसैले नहेरे पनि ठूलो साउण्ड पारेर खुल्लै राखेको हुनसक्छ । घरमा भाँडाकुडा असरल्ल हुन सक्छन । लुगाफाटा जहाँ खोलेको त्यहीँ फ्याँकी राखेको हुनसक्छ । फेसबुकमा लेख, रचना, फोटोसोटोमा लेखिएको कमेन्टले जीवनसाथी पाउरोटी फुलेजस्तो भैराखेकी हुनसक्छे । तपाईं घर पुग्नासाथ मोबाइल चेक गरेर यो कसको नम्बर ? यो कसको एकाउण्ट अथवा यो को मान्छे आदि ईत्यादि प्रश्नहरु तेर्सिन सक्छन् । अरु त अरु जसलाई देखे पनि गर्लफ्रेन्ड अथवा ब्वाइफ्रेन्ड हो भनेर आरोप पनि लाग्न सक्छ । यो सवै समय अनुसारको खेल हो भनेर चित्त बुझाउनुस् । तपाइँ घरपुग्दा हाँसेर स्वागत गर्ने जीवनसाथी । राम्रो लाइनमा लागेका अनुशासित छोराछोरी देखेर खुसी हुन्छु भन्ने सोचाइ छ भने निराशा हात लाग्न सक्छ । दोष कसैको हैन समयको हो भन्ने ठान्नुस् ।
खाना खान बस्ने बेला खानेपानीको जोहो आफैं गर्नुहोस् । थाल, बटुका आफैं सफा गरेको जाती । टेवल सेवल आफैं पुछपाछ गर्नुहोस् । यो सवै कुरा गरेर ठिक्क पारेर कसैले खान दिन्छ भन्ने सोच्नुभयो भने तपाइँ जस्तो पटमूर्ख कोही हुँदैन । नारीवाद र पुरुषवादबारे नजानेको कसैले छैन दश मिनटको खाना टायममा दुईघण्टाको लेक्चर सुन्ने रहर कसैलाई हुँदैन । ए, अनि तरकारी डढेको हुनसक्छ । नून नलागेको हुनसक्छ । अचार सचार नबनेको हुनसक्छ । किनकी सवैजना तपाईंजस्तै व्यस्त छन् । समाजिक सञ्जाल सवैको लागि हो । साथी सङ्गती सवैका हुन्छन् । एउटै कुरामा पुरै ध्यान लगाउने जमाना हैन यो । हातमा मोबाइल, कम्पाउण्ड भ्याउने वाइफाइ, भित्तामा टेलिभिजन, टेवलमा कम्प्यूटर त्यसै राखिएको हैन उपभोग पनि त गर्नु पर्यो नि हैन र ?
कामको सिलसिलामा सरकारी अड्डा अदालत त पुग्नै पर्छ । भनेको टायममा काम भएन भनेर चित्त नदुखाउनुस । मिठो वोलीबचनको अपेक्षा पनि नगर्नुस् । अपराधी जस्तो अगाडि ठिङ्ग उभिनुस । तपाइँको लागि बस्नुस भन्ने शिष्टाचार कोहीसंग बाँकी छैन् । हरेक शब्दमा हजुर हजुर लगाउनुस् । किनकी यो तपाइँ हामीले बसालेको कल्चर हो । सानो त्रुटी भेटिएको खण्डमा मिलाउन हजुर भन्नुस । यो मिलाउने कुरामा धेरै दम छ । तपाईंले पनि दुःख पाउनु हुन्न । दुःख दिन चाहनेले पनि दुःख दिँदैनन् । यसमा पनि कसैको दोष छैन समयको वाहेक ।
आदर्श नेताको इमान्दार अभिव्यक्ति सुन्न चाहने कान छ तपाइँको भने भरसक समाचार नसुन्नुहोस, नहेर्नुहोस् । विहान विहानै तपाइँको प्रेसर बढ्न सक्छ । सकारात्मक लेख रचना तथा टिकाटिप्पणीको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने पत्रपत्रिका किन्ने कष्ट आजै त्याग गर्नुस् । यसमा तपाइँ र खल्ती दुवैको भलाइ छ । यसो घुमफिर गर्दै हुनुहुन्छ भने मास्कसास्कको विचार गर्नुहोस । कतै तपाइँको छेउछाउ सरकारी मान्छे हुन सक्छन । सीधै विरोध त गर्न भएन नि ।
साथीभाइबीच यसो लेनदेन गर्नु भएको छ भने त्यो कुरा विर्सनुस । उसको खुसीले कहिले तिर्ने हो उसैसँग डेट लिनुस र खुसीसाथ बस्नुहोस । अन्यथा हानी तपाइँलाई नै हुनेछ । घुस्याहा हाकिम छ भने रिस वा विरोध नगर्नुहोस । बरु यसो टाउको कन्याएर आफ्नो व्यथा पनि पोख्नुहोस । दुईचार पैसा कमाउने अवसर हुनसक्छ । हाकिमका मान्छेले काम गरेनन, तपाइँलाई टेरेनन भने चुपचाप आफ्नो काम गर्नुहोस । सके उनीहरुको पनि गरिदिनुहोस । नत्र, भोलि घरैबाट परिपत्र बोकेर हाकिम साहब आउनेछन र तपाइँको अधिकार कटौति गरिनेछ । तपाइँलाई हदैसम्म खुम्च्याउने र सवैको अगाडि मानमर्दन गर्ने काम समेत हुनसक्छ ।
जीवनसाथीको अगाडि आफ्नो आमाबाबुको त्यति धेरै माया पनि नदेखाउनुस । यो अलि समयको खिलाफ छ । मनमा माया राखेर मुखले कुरा काट्नसक्नु भयो भने त्यो भन्दा राम्रो केही हुँदैन । व्यवहारमा अलि गोपनीयता अपनाउनुस । आखिर आफ्नो आमाबाबुको माया कसलाई लाग्दैन र । माया गर्ने तरिका अलिकति फरक पार्दैमा तपाइँको केही जाँदैन । आमाबाबुको नजरमा आफ्नो छोराछोरी कस्तो छ भनेर चिनिनु चाहीँ आवश्यक छ । उहाँहरुले बुझ्नुहुन्छ सवैकुरा । यो संसारमा बुझ्ने मान्छे भनेको आफ्नो आमाबुबा वाहेक कोही बाँकी छैन अब ।
अलि व्यभिचारी पति र पत्नी भएकाहरुलाई कसैले सुनाइ दिन सक्छन तेरो पति वा पत्नी फलानोसँग फलानो ठाउँमा भनेर । एउटै अनुहार भएका मान्छे संसारमा सातजनासम्म हुन्छन भन्ने कुरा नबिर्सनुस । अरु छ जनामध्ये कोही हुनसक्छ । वेकारमा किन टाउको दुखाउनु हुन्छ । खानुस पिउनुस आनन्दले मिठो निद्रा सुत्नुस ।
सवारी साधन आँफै हाँक्नुहुन्छ भने विचार गर्नुहोस तपाइँ सही हुँदाहुँदै गलत हुन सक्नुहुन्छ । झिँगाजस्तै भन्किएका मोटरसाइकल, स्कूटरको भीडमा मदहोश टिपर, साँढे ट्रक, वेपर्वाह बस, मत्ताहात्ती जस्तो बुलेरो, राजकुमार प्राइभेट कारहरु आदिआदि हुन्छन । निम्छरो भनेको म मात्र छु भन्ने सोच्नुहोस चौवर फाइदा तपाइँकै हात लाग्नेछ । स्पीड कन्ट्रोलको लागि सरकारले बनाइदिएको खाल्डाखुल्डी पनि विचार गर्नुहोस । सवारी साधनमा भएको क्षति सरकारसँग मुद्दा गरेर लिनसक्ने हैसियत तपाइँसँग छैन ।
यी र यस्तै प्रवृत्तिका धेरै कुराहरु तपाइँसामु विद्यमान छन् । कलियुग हो हजुर । यहाँ असल चिज झिल्काजस्तै छ र खराब चिज ज्वालाजस्तै । झिल्कालाई ज्वालाले निलिदिन्छ नि हैन र ? कलियुग अझै धेरै लामो छ यस्ता प्रवृत्ति तत्काल सकिन्छ भन्ने सोच्नु गलत छ । त्यसैले अस्तित्वमा रहनु छ भने रिस मार्नुहोस हजुर ।